Fitiavana, firaisana ara-nofo ary Internet | Ny valisoa valisoa
Home Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
"Inona no atao hoe fitia?" dia iray amin'ireo voambolana be mpitady indrindra amin'ny Internet. Ny famaranana ny Grant Study, fanadihadiana nandritra ny 75 taona tao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia ny "fifaliana dia fitiavana". Nasehony fa ny fifandraisana mafana no fototry ny fahasalamana, harena ary fiainana lava. Mifanohitra amin'izany, ny fiankinan-doha, ny famoizam-po sy ny neurosezy no sakana lehibe indrindra amin'ity fanjakana irina indrindra ity. Ny fahazoana ny risika manodidina ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia zava-dehibe raha te hiala amin'ny fidorohana amin'ny fiankinan-doha isika ary hahita fifandraisana fitiavana mahafa-po. Tena zava-dehibe ny fahazoana mangeja ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet.
Ao amin'ity fizarana ity, ny Reward Foundation dia mandinika ireo fomba maro samihafa ifandraisan'ny olona mandritra ny androm-piainany. Inona no mahatonga ny fifandraisana hiasa? Ahoana no ahafahanao mifankatia sy mifankatia? Inona avy ireo fandrika mety hahavoa anao?
Mifantoka amin'ny siansa amin'ny fifandraisana mahomby isika. Amin'ny tranga sasany dia mila jerenao ny biolojika sy ny siansa amin'ny ati-doha mba hahalalana izany rehetra izany. Ny Coolidge Effect dia matanjaka indrindra.
• Inona no atao hoe fitia?
• Fitiavana toy ny fifandraisana
• Fitiavana toy ny faniriana ara-nofo
• Manimba ny faniriana hanao firaisana
• Firaisana ara-nofo sy sary vetaveta